High Productivity High arụmọrụ Cotton Yarn agbagọkwa Machine - Error 404 (Not Found)!!1
High Productivity High arụmọrụ Cotton Yarn agbagọkwa Machine
Chemical Long Fiber Two-for-otu Twister oji otu mbịne abụọ agbagọkwa. Ya arụmọrụ dị elu karịa omenala igwe n'oge. Were-elu olu-amụba, dịghị piecing na iri puku mita, agbagọkwa quality ukwuu mma. Simple mbanye usoro, mfe mmezi.
High mmepụta abụọ N'ihi na One Cotton Yarn agbagọkwa Machine
The yarn agbagọkwa igwe nwere obosara ngwa scopes, n'oge a haziri, nnukwu weghara ego, oke ọsọ. Ọ dị mfe iji rụọ ọrụ ma na-enwe, ala ụzụ na ike oriri. Ọ bụ a elu arụmọrụ na mmepụta yarn agbagọkwa igwe na-agbagọkwa na stranding. Ọ nwere usoro na mbara direction inyerịta. Stranding na-agbagọkwa nke eriri nwere ike okokụre n'otu oge. O kwesịrị ekwesị ka isi na-agbagọkwa na re-agbagọkwa nile di iche iche nke Pee eriri, eyi eriri, PITA eriri, naịlọn eriri, owu eriri, agbagọ ụdọ na obere size.
● Wide nso nke igwe ona iche iche usoro chọrọ si ezi voile yarns ka ntụ kapet yarns.
● Anọ spindle mbanye na erughị ala rollers maka belata ike oriri.
● arị arị ngwaọrụ ndokwa maka soft ọnya kpọmkwem e ji esiji ákwà nchịkọta.
● kasị ala ike oriri.
● Kachasinu exported agbagọkwa igwe si China
● All ígwè ọrụ dị na ezigbo atụmatụ maka amị anwụ nchịkọta, ịkpa ákwà yarns etc.
Abụọ N'ihi na One Cotton Yarn agbagọkwa Machine
16spindles / ngalaba, ọkọlọtọ bụ 128 spindles / set
Ugboro abụọ n'akụkụ otu oyi akwa
65- 2025T / M mgbanwe
S ma ọ bụ Z
N'akuku nke asọfe
Star-Delta ngwa ngwa mmalite
Ájị mgbasa ịnya ụgbọ
16spindles(2448*900*1270), akara igbe ogologo 2500mm
Q1: Machine uru
A: Nrụgide a na-achịkwa n'ibu ụzọ. N'ịbụ-abọli-akpaghị aka mgbe a yarn ezumike emee aka ọrụ ka mfe ịmata ọnọdụ.
Q2: Nwere ike nke a igwe na-adabara owu ?
A: Ee, Igwe a na kwesịrị ekwesị n'ihi na owu, ajị anụ, acrylic na blended yarns
Previous : FH230A elu ọsọ yarn agbagọkwa igwe DTY S ma ọ bụ Z
Osote : DTY POY HDY FDY Chemical Fiber 50-3000T / M na-agbagọkwa Machine Mere na China